International Hotel Projects - Armati Ihhotela Project Case Study1 - Sunrise Kempinski Hotel Beijing
ULwesibili, July 21, 2015 7: 43: 29 PM America / Los_Angeles
Enye yezinto Armati 5 ukuqala hotel project e Beijing, China, wamukelekile ukuba vakashela leli hhotela ukubona isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu yethu.
Armati isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu catalouge sicela uhlole okulandelayo:
Kempinski ekwamukela wena Yanqi Lake, yisiphephelo entsha enokuthula ubuhle, abanemibono omangalisayo Yanshan Mountain kanye Mutianyu Great Wall, nje drive wehora elilodwa eqhamuka eBeijing City Centre. Sunrise Kempinski inikeza izivakashi kanye nemindeni yabo okuhlangenwe nakho okuthakazelisayo endaweni yokungcebeleka entsha ngokuphelele-kuhlanganiswe emaphethelweni Beijing. Facilities zihlanganisa 306 guestrooms Suites, izikhungo behlangana, Kempsinki The Spa, izindawo zokuzithokozisa kanye imfanelo, a Kid sika Club uxhaxha iminikelo Culinary at zokudla yayo ayisishiyagalolunye nemigoqo.
Kwadalwa Shanghai Huadu Architect Design Co., Sunrise Kempinski Hotel, Beijing emelela ukuma ilanga liphuma begodu lifanekisela ukuvumelana, ubunye kanye infinity. Ibhayisikobho nombono side angle, isakhiwo ehhotela lesi sijame njengebhoksi i-scallop elimelela 'Fortune' isiko Chinese. Ngaphambili umbono yilokho 'YeJapan' - ongokomfanekiso fast- athuthukayo umnotho China.
Luxury Fiver isiqalo hotel yokugezela project Kempinski